IMotorola yethula imodeli yayo emaphakathi nebanga, iMoto X4 | Izindaba zamagajethi
URuben gallardo | | AmaSelula
IMotorola iyaqhubeka nokwethula amatheminali amasha emakethe. Khumbula ukuthi inkampani yaseNyakatho Melika manje ingeyeLenovo yaseJapan. Yize anqume ukugcina lesi sigaba esisha sizimele ngandlela thile futhi abe nesigaba sakhe esingumahamba nendlwana lapho bengeza khona imishini emisha. Manje sekuyithuba le- I-Motorola Moto X4.
Le mobile entsha ingena ngokuphelele ebangeni eliphakathi lomkhakha. Manje, njengenjwayelo nge-Motorola, izonikeza nokuningi ongakhuluma ngakho. Futhi yilokho IMotorola Moto X4 ibuye ibhejele ku-chassis engazweli nekhamera yangemuva ephindwe kabili. Lokho wukuthi, landela ukuthambekela kwamanje kancane bese weqa kwi-bandwagon ukuze uthole isabelo esithile semakethe. Manje sizobona ukuthi intengo ihambisana yini nokuthi izici zayo zobuchwepheshe ziyahambisana yini.
1 Isibonisi esigcwele se-HD ne-chassis eqinisekisiwe ye-IP68
2 Iprosesa ye-Mid-range Qualcomm ne-3GB ye-RAM
3 Ikhamera enemfashini: inzwa embaxambili nekhamera yangaphambili enamandla ye 'selfies'
4 Ukuxhumana nohlelo lokusebenza
5 Ukuzimela nentengo
Isibonisi esigcwele se-HD ne-chassis eqinisekisiwe ye-IP68
Into yokuqala esifuna ukukutshela ngayo ngale Motorola Moto X4 entsha ukuthi isikrini sayo sifinyelela kuma-intshi angu-5,2 ngokulandelana. Ngeke kube ngomunye wemishini emikhulu emakethe, kepha akukhona ukuthi wonke umuntu udinga isikrini esiseduze kwamasentimitha ayisithupha. Ngokufanayo, isinqumo esifinyelela kuso yi-HD ephelele. Akudingekile ukuthi ube namaphikseli amaningi ukuze ukwazi ukujabulela okuqukethwe yikhwalithi kuzikrini ezincane, kepha ukwazi ukuthi umkhakha ugcwalisa izikrini ze-QHD, kungahle kube kufushane kulokhu.
Ngakolunye uhlangothi, i-chassis yalokhu IMotorola Moto X4 ayizwani nothuli namanzi. Iqinisekiswe nge-IP68, ngakho-ke ungayifaka ngaphansi kwamanzi ngobuningi obukhulu bamamitha ayi-1,5 imizuzu engama-30. Ngemuva kwalezi zibalo, umenzi akanacala ngokungasebenzi kahle kwemishini. Futhi, futhi ngokungafani nalokho okuvame ukwenzeka kwamanye amamodeli, isifundi seminwe sale Motorola Moto X4 sikhona ngaphambili.
Iprosesa ye-Mid-range Qualcomm ne-3GB ye-RAM
Ngokuqondene ne-chip ekhethwe ukunika amandla ikhompyutha, uLenovo uthathe isinqumo sokuhlanganisa i-chip evela kuQualcomm eyaziwayo. Ukucaciswa kabanzi, kunqunywe ku- I-Snapdragon 630, enama-cores we-8 asebenza kumvamisa ye-2,2 GHz. Le chip ingenye yaleyo efike kulo nyaka ka-2017 izothatha indawo ye-Snapdragon 625 endala.
Okwamanje, engxenyeni ye- Imemori ye-RAM sithola ukuthi i-Motorola Moto X4 ihlomisa ngo-3 GB. Akusona isibalo esiphakeme kunazo zonke okwamanje. Ngaphezu kwalokho, mhlawumbe kwezinye izindlela zamaShayina ungathola amamodeli anenkumbulo ethe xaxa. Kepha kuyiqiniso ukuthi nge-Android emsulwa nalezi 3 GB ze-RAM isiginali izosebenza kalula kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, isikhala sesitoreji esinikezwa yi- smartphone IMotorola ine Umthamo we-32 GB, yize ungasebenzisa imemori khadi ye-MicroSD efinyelela ku-2 TB.
Ikhamera enemfashini: inzwa embaxambili nekhamera yangaphambili enamandla ye 'selfies'
Okwenzelwa le Motorola Moto X4 entsha inkampani ayikaze icabange kabili. Babheje ngqo kwifomula yokuwina: ukubeka i- ikhamera yangemuva yenzwa embaxambili. Kulokhu sizoba nenye enesixazululo sama-megapixels ayi-12 kanti enye izoba nama-megapixels ayi-8. Umphumela usazobonakala, kepha ngokuqinisekile ngeke ushiye noma ngubani angathinteki. Le khamera nayo Uzokwazi ukurekhoda amavidiyo futhi uzokwenza lokho ngesinqumo esiphezulu se-4k ngo-30 fPS.
Okwamanje, ikhamera yangaphambili inamandla. Futhi ukuthi ukuthatha ama-selfies kuyigugu. Ngakho-ke, inzwa yale khamera inayo Isixazululo esingu-16 megapixel futhi lokho kuhambisana nombani.
Ukuze uzithengise kahle, i- IMotorola Moto X4 kumele ibe sesikhathini. Futhi esigabeni sokuxhuma azikho izikhalazo ezingenzeka. Lesi siginali siyahambisana namanethiwekhi akamuva esizukulwane se-4G. Ibuye ibe nobuchwepheshe obufana ne-Bluetooth 5.0 (ukusetshenziswa okuphansi), i-WiFi enejubane elikhulu ne-NFC (yezinkokhelo nokuxhuma nezinsiza ezihambisanayo). Ngenkathi isesimweni somzimba, sizoba nojeke we-3,5 millimeter audio kanye nechweba le-USB-C ukushaja noma ukuxhuma imingcele yangaphandle.
Ngokuqondene nesistimu yokusebenza, i-Android iyona protagonist ephelele kulo lonke uhla lwe-Motorola. Kulesi simo esithile uzoba nohlobo I-Android 7.1 Nougat. Futhi njengoba besivele sikuxwayisile ngenhla: ayizi nongqimba wangokwezifiso, iyi-Android emsulwa.
Iselula enhle kufanele inikeze, okungenani, ukuzimela kosuku lonke ngaphandle kokungena epulaki. Le Motorola Moto X4 izokwenza. Ibhethri layo linamandla angu-3.000 milliamps Futhi khumbula ukuthi ayinaso isikrini esikhulu kunazo zonke emakethe futhi. Ngaphezu kwalokho, uma ungumsebenzisi onamandla futhi ungomunye walabo 'abaphuza' ibhethri esikhathini esingaphansi kosuku, IMotorola Moto X4 ithokozela ukushaja okusheshayo lokho kuzokuvumela ukuthi ube namahora we-6 wokuzimela okungeziwe ngokukhokhiswa kwemizuzu eyi-15 kuphela.
Ekugcineni, iMotorola Moto X4 izoqala ukuthengiswa ngalo Septhemba kwezinye izimakethe zase-Europe; ngokuhamba kwesikhathi i-United States ne-Asia bazofika. Y intengo yayo yokuthengisa izoba ngama-euro angama-399.
Imininingwane engaphezulu: Samsung
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » IMotorola yethula imodeli yayo emaphakathi nebanga, iMoto X4
I-Kirin 970, iprosesa yokuqala enophiko lwe-Artificial Intelligence